Home SORATRA FOTOTRA FOOTBALL SOUTH AMERIKA Mpilalao Football Arzantina Emi Buendia Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay malaza indrindra "Buendia". Ny tantarantsika Emi Buendia Childhood sy ny Untold Biography Facts dia mitondra aminao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny fiainana sy ny fiakaran'ny Emi Buendia. Sary nahazoan-tsary: ​​Instagram sy Lanuevacronica.
Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainany manokana, ny zava-misy ao amin'ny fianakaviana, ny fomba fiainany ary ny zavatra tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizany mamorona tranga na hanao pasipaoro farany fahatelo. Na izany aza, vitsy ny mihevitra ny Biolojia Emi Buendia izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Emiliano Buendía Stati dia teraka tamin'ny andro faha-25 tamin'ny Desambra 1996 tao amin'ny tanànan'i Mar del Plata ao atsimo atsinanan'i Buenos Aires, Arzantina. Teraka tamin'ny reniny, Karina ary tamin'ny rainy Eduardo izy.
Emi Buendia ray aman-dreny Karina sy Eduardo. Sary: Instagram.
Misaotra fa teraka tany Arzantina - firenena malaza amin'ny famokarana mpilalao baolina kitra toa ny Maradona ary Messi - Buendía dia manondro ho Arzantina ny foko fotsy miaraka amin'ny faka Amerikana Tatsimo. Nobeazina tao amin'ny tanàna fonenany - Mar del Plata tao izy ary lehibe niaraka tamin'ny zandriny roa - Augustin sy Joaquin.
Sarin'ny fahazazak'i Emi Buendia (ankavia) lehibe tao an-tanànany izay niaraka tamin'i Augustin zandriny. Sary: Instagram.
Nihalehibe tao Mar del Plata, i Bendendia dia zazalahy kely iray izay azo inoana fa lehibe kokoa noho ny ankizy tsy misy afa-tsy ireo rahalahiny. Na eo aza izany dia nieritreritra bebe kokoa momba ny baolina kitra noho ny zavatra rehetra izy ary manana ny endri-javatra toa ny hafainganam-pandeha sy ny tanjaka izay nilaza tsara ny hoaviny amin'ny fanatanjahantena.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Tamin'ny fotoana nanombohan'i Buendía an'i 5, nanomboka nilalao baolina ho an'ny klioba local, Cadetes de San Martín, hetsika izay nofininy tamin'ny fianarana tao amin'ny Institut Peralta Ramos tao amin'ny tanànany Mar Mar Pl Plata.
Emi Buendia nanomboka ny fananganana ny asany tao amin'ny klioban'ny zazalahy Cadetes de San Martín. Sary nahazoan-tsary: ​​Instagram sy alongcomenorwich.
Nandritra ny Cadetes de San Martín, Buendia dia nandany enin-taona nandritra ny fahazazany tamin'ny lalao kilasy anatiny. Ny fahaizan'ny prodigy baolina amin'ny fahitana amin'ny fahaiza-manaon'ny teknika sy ny fitsikilovana ara-teknika mihoatra ny taonany sy ny haben'ny fahantrany dia nitaona azy ho mpilalao iraisam-pirenena Arzantina - Juan Esnáider izay nanoro hevitra hanohizany hanangana karatra amin'ny fanatanjahantena ao amin'ny Real Madrid Academy.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Na dia 11 taona aza i Buendia dia tonga tany Real Madrid, dia mbola vitsy santimetatra kosa izy ireo akaiky ny ahitra amin'ny fofom-borona vita amin'ny artifisialy izay nitadiavany tsy tapaka hanaporofoana ny hasarobidiny.
Emi Buendia dia tonga tao amin'ny Akademia Real Madrid tamin'ny naha-zazalahy kely 11 taona 2008. Sary: Instagram.
Ny fivoarana ara-batana farany nataon'i Buendia ary niaraka tamin'ny tsy fahaizany mihazona ny hafainganam-pandeha toa an'olon-kafa, tamin'ny farany dia nahatonga azy handao ny klioba izy roa taona taty aoriana. Soa ihany, manatona an'i Getafe izy izay nanasonia azy andro andro taorian'ny nandaozany ny Real Madrid.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Road To Fame Tantara
Ilay tanora dia tsy nandany fotoana hipetrahana tao Getafe izay nandroso tamin'ny laharana ambony sy fahaiza-manao talohan'ny nahazoany toerana teo amin'ny ekipa fitahirizan'ny klioba tamin'ny taona 17. Ny asany dia hitazona ny fihazakazahana miakatra mandra-pahatongan'ny vanim-potoana 2015 / 16 dia nahita an'i Getafe nihena indray avy tao LaLiga.
Tsy ela akory dia nifandona tamin'ny ratra izay nandao an'i Buendia ny ampahany tamin'ny niverenan'i Getafe. Tamin'ny fotoana nanafahan'i Getafe ny famerenana azy tamin'ny farany, dia afaka nanam-bava mora foana i Buendia nanangana asa tany an-dapa noho ny ratra tamin'ny kitroka.
Ny fiak'i Emi Buendia tao Getafe dia naratra tamin'ny famerenana sy ny ratra. Sary: Instagram.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Mitsangàna mba haka tantara
Buendia tanteraka tanteraka dia nindramina tamin'ny klioba faharoa an'ny Cultural Leonesa tamin'ny Jolay 2017 mba hanavotra ny tenany. Nanaparitaka ny tsy fahitana izany hetsika izany ho lasa lohamilina ny fahombiazan'i Buendia satria nandeha lavitra tamin'ny nanafika ny midfield izy. Tamin'ny faran'ny vanim-potoana, dia nanana antony nitsiky ihany i Buendia rehefa nihazona ny mpilalao ny loka Leonesa izy!
I Emi Buendia dia mpilalao Cultural Leonesa tamin'ny vanim-potoana 2017-2018. Sary: Lanuevacronica.
Tsy ho ela i Norwich dia niantso an'i Buendia izay mifanaraka amin'ny fikasan'izy ireo hiverina any amin'ny lalam-pirenena voalohany. Rehefa nanao sonia fifanarahana nandritra ny efa-taona nifanaovana tamin'io lafiny efa nihemotra io i Buendia dia nantenaina tamim-pitandremana satria nahatratra tanjona 8 tamin'ny English Football League (EFL) izy mba hanampiana an'i Norwich ho fampiroboroboana amin'ny Ligy Premier. Haingam-pandeha hatramin'izao dia nanangana ny tenany ho tompon'andraikitra voalohany tamin'ny ligy voalohany tany Norwich i Buendia izay antenaina hanohizany hatrany ny lalao baolina kitra mandrapaha 2024.
Emi Buendia nanao sonia fifanarahana vaovao miaraka amin'i Norwich City tamin'ny Jolay 2019. Sary nahazoan-tsary: ​​Kanaria.
Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Tena sarotra ny mametraka sata manokana ho an'ny fiainana mifandraika amin'i Buendia amin'ny fotoana nanoratana. Na eo aza izany dia eo anelanelan'ny fifaneraserana sy fanambadiana izy. Ilay vehivavy eo amin'ny sarin'ny fiainam-pitiavan'i Buendia dia mamaritra ny anarana hoe Claudia.
Emi Buendia miaraka amin'ny sipany na wag Claudia. Sary: Instagram.
Na dia tsy fantatra mazava aza raha manana tantaram-pitiavana niaraka tamin'ny vehivavy hafa i Buendia talohan'ny nihaonany tamin'i Claudia, dia fantatray fa efa niara-niangona teo alohan'ny 2018 ny olon-tiana ary niteraka zanakalahy iray antsoina hoe Thiago.
Emi Buendia miaraka amin'ny vadiny sy Thiago zanany lahy. Sary: Instagram.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Emi Buendia dia avy amin'ny fianakaviana niaina fianakaviana sy saranga. Jereo ny antsipirihany momba ny fiainam-pianakaviana.
About Emi Buendia's Rain: Eduardo dia dadan'i Buendia. Toy ny fanohanan'ny ray aman-dreny baolina kitra rehetra, izy nahita ny fiantohana an'i BuendÃa nandritra ny fananganana asa tao amin'ny rafitry ny rafi-pandehanana ao Madrid sy ny tanora an'ny Getafe amin'ny fanaovana fitsidihana tsy tapaka amin'ny firenen'ny baolina kitra na dia nilaza aza ny antokon'izy ireo manohitra ny faniriana ny baolina kitra. Ny fifamatorana misy eo amin'ny rain'izy telo mianadahy sy Buendia dia mihamatanjaka hatrany satria ny afovoan-tany manafika dia tsy milavo lefona amin'ny fianakaviany fotsiny na eo amin'ny sehatra filalaovana.
Momba ny Renin'i Emi Buendia: Carina Is Buendia dia renin-dramatoa ary mifamaly amin'ny vehivavy taorian'ny fon'ny Buendéa. Ambonin'ny zava-drehetra, izy no mpiambina ny tantara momba ny sorona izay nataon'ilay fianakaviana mba hahazoana antoka fa nanjary fahombiazana ny nofin'i Buendia. Mizara ny lazany vaovao ho an'ny fianakaviana izy amin'ny fisehoana sary izay maka an'i Buendia mandany fotoana tsara amin'ny fianakaviana ary koa manao firaisa-tena aminy rehefa mivoaka.
Momba ny Rahalahy Emi Buendia: Buendia dia manana mpirahalahy roa antsoina hoe Augustin sy Joaquin. Tsy miaina ambanin'ny aloky an'i Buendia ny duo fa mifono tsara amin'ny lalan'ny asany manokana. Miantehitra amin'i Buendia izy ireo isaky ny fialan-tsasatra ary manampy azy hanadino ny fahatsiarovan'izy ireo tamin'ny andro taloha.
Emi Buendia miaraka amin'ny ray aman-dreny sy mpirahalahy roa.Image Credit: Instagram.
Momba ny havana Emi Buendia: Mikasika ny hazo fianakaviana lehibe kokoa an'i Buendia, ny raibe aman-dreniny ary ny raibe sy renibe dia iray amin'ireo zava-miafina tsy voafetra amin'ny baolina kitra kanefa tsy misy firaketana misy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, nenitoany, zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Torak'izany koa, ireo zanak'olo-mpirahalahy BuendÃa dia tsy mbola fantatra amin'ny fisehoan-javatra lehibe ao amin'ny fiainany ary hatramin'izao.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Ny fiainan'ny tena manokana
BuendÃa dia manana toetra manaitra mahafinaritra izay mahatonga azy hanana persona tokana. Ankoatr'izay, nasehony ny toetran'ny Aquarius zodiac ho mpikaroka sy mifantoka amin'ny hetsika.
Miala lavitra amin'ny filalaovana lalao mifaninana sy fanatrehana fiofanana, manana tombontsoa sy fialamboly vitsivitsy i BuendÃa ao anatin'izany ny fijerena sarimihetsika, mihaino mozika, milomano ary milalao tennis.
Emi Buendia dia mitendry Paddle Tennis ho toy ny asa fanaingoana. Sary: Instagram.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Fiainana momba ny fiainana
Miresaka momba ny fomba nandaniany sy nandaniany ny volany i Buendia, ny tambin-karam-bolany no nitombina tamin'ny karama azony azony tamin'ny filalaovana baolina kitra an-tampony ary ny mpiorina hafa kosa dia harena ara-bola azony avy amin'ireo marika manohana an'i Nike.
Na eo aza ny fandinihana ny fomba fandaniam-bola Buendia amin'ny fividianana fananana toy ny fiara sy trano dia mbola jerena ihany, dia mamely ny mpankafy izy ho toy ny miaina fiainana tsara tarehy amin'ny alàlan'ny fandaniana fotoana tsara amin'ny toerana fialan-tsasatra mahafinaritra manerana izao tontolo izao.
Emi Buendia mankafy ny fialan-tsasatrao amin'ny tora-pasika any Miami. Sary: Instagram.
Tantara Emi Buendia Firaisana Ankizy Miampy Fanamarihana Biography Untold - Untold Facts
Alohan'ny hiantsoanay azy io dia fonosana ny tantaran'ny fahazazan'i Emi Buendéa sy ny fiainana an-tsaina, azafady mba jerena eto ambanin'ny zava-misy tsy dia fantatra na tsy fantatra izay mety hanampy anao hahafantatra azy bebe kokoa.
FIVAVAHANA: Ny mpilalao baolina kitra dia tsy voatonona nanao fanambarana izay mety handalinana ny fanekem-pinoana iray, na tsy voahaingo ho naneho fisaorana noho ny olona ambony kokoa fony izy nilalao baolina kitra. Na izany aza, ny fanoherana dia mankasitraka azy ho kristianina.
ANTANOMPOANA: Nanomboka ny asany baolina kitra iraisampirenena i Buendia tamin'ny nisolo tena an'i Espana ho tanora fony izy nanova ny fahatokisana hilalao ho an'ny lafiny ara-pirenena Argentina.
Emi Buendia milalao ho an'ny ekipa Argentina U20 any 2015. Sary nahazoan-tsary: ​​AlongComeNorwich.
Tattoo: Tsy manana tatoazy iray amin'ny vatany izy ary mamely olona maro toy ny izay mitazona hoditra tsy misy pentina ho an'ny ampahany tsara amin'ny asany.
FAHAGAGANA sy fisotroana: Imety ho mora kokoa ho an'i BuendÃa ny hampiato ny fanampiana lehibe fa tsy ny fifohana sigara na ny fisotroana.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantarahan'ny Emi Buendia Childhood ary ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Diary Football Football Norwich City
Manuel Lanzini Tantara Momba Ny Tantaram-pahamendrehana Ankapobeny
Efa nisy hatramin'izay ny tantaram-piraisan'i Banega momba ny tantaran'ny ankizy
Erik Lamela tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pitiavam-bahoa bebe kokoa
Javier Pastore tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
salama facundo Janoary 25, 2020 Tamin'ny 3: 56 hariva
Tena olona lehibe avy amin'ny fianakaviana manetry tena sy be fitiavana izy. Mpilalao rugby lehibe izy. ny fianakaviany rehetra dia avy amin'ny lafiny rugby.
Gonzalo Higuain tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny tantaran'i Lionel Messi Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana